The boy from Malaysia | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » The boy from Malaysia
The boy from Malaysia
Posted by အဂျစ် on May 31, 2012 in Copy/Paste | 13 comments
ဒီ video လေးကိုကြည့်စေချင်ပါတယ် လိုအပ်တာသင်ပြကြပါခင်ဗျာ
ဗီဒီယို ဖိုင်မဟုတ်ဘူးနော် ၊ way pho shot.3gp တဲ့ ။ ကြည့်ကြည့်လိုက်ဦးမယ်
ဗီဒီယိုတော့ ကြည့်ပြီးသွားပြီ ..
စပီကာ ပျက်နေလို့ ဘာတွေ ဘယ်လို ပြောမှန်း မသိဘူး ..
အဲဒါ သိမှ ပိုပြီး အသက်ဝင်မယ် ထင်တယ် ..
စိတ်မကောင်းစရာဘဲ… ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လေးနဲ့ 
Kawasan Perindustrian Sungai Nal, Jalan Stapunal,
18000 Kuala Krai,Kelantan. လို့ တော့ သူ့ Website မှာတွေ့ တယ်
သူ့ ကို ကဲန်ချေးနဲ့ လာခေါ်တဲ့ ကိုစိုးဝင်းဆိုတာ လူမှု အဖွဲ့ အစည်းကလား ဒါမှမဟုတ် အေးဂျင့် / ဆွေမျိုးသားချင်းထဲကလား.. လူသားချင်းစာနာမှုရှိတဲ့သူပါဘဲ
ကုမ္ပဏီက ဘယ်လို ဆောင်ရွက်ပေးလိုက်ပါသလဲ
အသံဖမ်းထားတာ သိပ်မကြည်လို့ ..
အခုပြန်ရောက်သွားပါပီ။ ကိုစိုးဝင်း ကိုသဌေးကစရိတ်ခံပြီးသွားပို့ခိုင်းတာပါ။ဒီမှာလူမှုရေးအဖွဲစည်းမရှိပါဘူး ။ကျွန်တော်ကတော့ နိုင်သလောက်လုပ်ပါတယ် အထူးသဖြင့် စကားပြန်ပါ ။ ဆေးရုံ ဆေးခန်း ကဆရာဝန်အတော်များများက မြန်မာပြည်သားကိစ္ဓဆိုကျွန်တော့ကိုအသိပေးကြ လို့ ပါလေရာဖြစ်နေတာပါ၊kota baru မှာအထူးကုဆရာမ ဒေါ်ဝင်းမာတို့ဇနီးမောင်နှံ ၊Tenah merah မှာ ကိုသားကြီး တို့လည်း တတ်အားသရွေ့ကူညီကြပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အသင်း အဖွဲ့ အနေနဲ့တော့မလုပ်ဖြစ်သေးပါဘူး
သူတပါးနိုင်ငံမှာ ဒုက္ခရောက်နေသူ.. မြန်မာတွေတွေ့တိုင်း..
.. မြန်မာပြည်တွင်းလာရောက်နေထိုင်နေကြတဲ့.. တခြားနိုင်ငံကသူတွေကို.. ကိုယ်ချင်းစာကြစေလိုကြောင်း..
TQ ပါသဂျီး Burglish test engine နဲ့ ရေးနေရလို့ စာသိပ်မရေးနိုင်ဘူးး
သူဂျီးရေ .. ပို့စ်နဲ့ မဆိုင်ပေမယ့် သူဂျီးပြောတဲ့ …. မြန်မာပြည်တွင်းလာရောက်နေထိုင်နေကြတဲ့.. တခြားနိုင်ငံကသူတွေကို.. ကိုယ်ချင်းစာကြစေလိုကြောင်း.. ဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်လို့ပြောရလျှင် …. လာရောက်နိုင်ထိုင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အနေထားခြင်းကွာတာကိုလည်း မေ့မထားစေချင်ပါဘူး …. ။ အလုပ်လုပ်ကြတာခြင်းတူပေမယ့် …ကျွန်မတို့ လူမျိုးတွေ သူများ နိုင်ငံကို သွားလျှင် အများစုက သူများ အလုပ်လုပ်ကြရတာပါ ။
နိုင်ငံခြားသားတွေ ကိုယ့်နိုင်ငံတွင်းအလုပ်လာလုပ်လျှင် … သူဌေးလုပ်သူကလုပ် ၊ အလုပ်သမားခေါင်းလုပ်သူကလုပ် ၊ ဆူပါဗိုက်ဇာလုပ်သူကလုပ်နဲ့လေ … မြန်မာတွေရဲ့ အောက်ခြေ၀န်ထမ်းနေရာက လာလုပ်သူ ဘယ်နှစ်ယောက်များ ရှိပါ့မလဲ … ။
ဒီတော့ရာ … မြန်မာနိုင်ငံက အလုပ်သွားလုပ်သူတွေ ခံစားရတဲ့ ဒုက္ခနဲ့ …. မြန်မာနိုင်ငံကို အလုပ်လာလုပ်သူတွေ ခံစားရတဲ့ ဒုက္ခ ဒီနှစ်ခု နှိုင်းယှဉ်ကြည့်လျှင်တောင် ချိန်ခွင် လွှာပြောင်းပြန်စောင်းသလိုကြီး မတူညီတာ တွေ့ရမှာပါ …. ။
မြန်မာပြည်ထဲ.. မိဘတွေမွေးဖွားကြီးပြင်းတာတောင်.. နောက်မျိုးဆက်ကို နိုင်ငံသားမပေးတဲ့တိုင်းပြည်… လူလူခြင်းခွဲခြားနိမ့်ချမှုအများဆုံးတိုင်းပြည်..
.. ဘာသာရေး..ဓလေ့..ရိုးရာမျက်နှာဖုံးတပ်ပြီး လူရိုက်လူသတ်..ဒုစရိုက်တွေ.. ရက်စက်တာတွေလုပ်တဲ့တိုင်းပြည်…
အယူအဆအတွေးအခေါ်မတူရင်.. အကြမ်းဖက်နည်းနဲ့လုပ်ဖို့.. တွေးကြတဲ့သူတွေများတဲ့တိုင်းပြည်…
အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် အဲလို အုပ်စုနဲ့ ၀ိုင်းလုပ်တာထင်တယ်။
ဝိုင်းလုပ်တာမဟုတ်ဘူးအကို ၊ ဝိုင်းထိန်းကြတာလေ ၊ ရူးသွားလို့ ၊ mp4 ရှိတယ် fail said ကြီလို့ 3gp ပြောင်းတာ အသံကဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူး